Fikambanan-jiolahy :: Vehivavy vao avy tera-bao nogadraina eny Antanimora • AoRaha
Naiditra am-ponja vonjimaika, eny Antanimora, ny vehivavy iray vao avy terabao andro vitsy, afak’omaly, taorian’ny fiakarana teny amin’ny Fampanoavana. Voatondro ho naman’ilay zandary maty voatifitra teny amin’ny Fasan’ny karàna rehefa avy nandroba volabe tao anaty fiara iray, teny Anosimpatrana, tamin’ny alarobia 5 aogositra lasa teo, izy.
Vao enina amby telopolo taona ity vehivavy ka ny famatsiana basy an’ireo mpanafika no nahavoasaringotra azy. Nogadraina eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy kosa izy roa lahy, izay niaraka tamin’ity zandary nanafika.
“Teny Itaosy no nisamborana an’ilay vehivavy. Nitondra ny zanany natao vaksiny tany amin’ny toeram-pitsaboana izy ka efa niandry azy tao antranony ny polisy. Fantatra fa migadra any am-ponja noho ny fitazomana sy fikirakirana fitaovam-piadiana ny vadin’ io vehivavy io”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ ny mpanao famotorana.
Ny polisy ao amin’ny Borigady misahana ny heloka bevava sakelika fahefatra (BC4) no nanao ny famotorana sy ny fanadihadiana rehetra tamin’iny fanafihana teny Anosimpatrana iny.
Tsiahivina fa lehilahy roa nanao fanamiana mitovy amin’ny an’ny Polisim-pirenena no nisava sy nandroba vola 36 tapitrisa ariary tao anaty fiara “Volkswagen Crafter” iray nandalo teny an-toerana. Nandositra tamin’ ny môtô izy ireo, rehefa nahazo ny vola. Niantso vonjy kosa ilay lasibatra ka ny polisy teo Anosizato no nanenjika an’ireo jiolahy. Nianjera noho ny fandehanana mafy ny môtô nandehanan’ireo olon-dratsy. Maty voatifitra ny iray tamin’iretsy farany. Tafaporitsaka ny namany saingy, ny harivan’ io ihany dia tratra niaraka tamin’ ny lehilahy iray hafa.
Nandritra ny fitsirihana nataon’ny polisy no nahafantarana fa zandary amperinasa ilay jiolahy voatifitra. Polisy efa naato tamin’ ny asany kosa ny iray tamin’ ireo voasambotra. Notadiavina ny olona namatsy basy an’ireto olon-dratsy. Taorian’izay rehetra izao no nahatrarana an’ity vehivavy vao tera-bao ity.
Vono olona tany Tsiroanomandidy :: Handefasana fiantsoana ireo miaramila enina voarohirohy
Ady lehube any Ikalamavony :: Mafy ny fifandonana amin’ireo dahalo